मार्गदर्शन दुई-wheeled गाडी - विभिन्न विकल्प र लाभ
जहाँ तपाईं अपेक्षाकृत भारी वा भारी भार सार्न चाहनुहुन्छ अवस्थामा, एक दुई-wheeled हात ट्रक छ त्यस्तो सहायक, बिना गर्न सक्नुहुन्न। यो अपरिहार्य देश मा, स्टक बाहिर मल वा बाली को परिवहन को लागि, माल को परिवहन, र किनमेल लागि हो।
दुई-wheeled Carts को लाभ
हामी लोकप्रियता धेरै यी किनभने indisputable लाभ र वजन लाभ को Carts पाउनु भएको छ। क्षति र टूटना वृद्धि maneuverability, स्थायित्व र प्रतिरोध प्रदान, आफ्नो सानो आकार ध्यान दिनुहोस् पहिलो कुरा। साथै, एकदम व्यापक दायरा तपाईं आकार मा उपयुक्त छ र केही आवश्यकता पूरा गर्ने ट्रक चयन गर्न अनुमति दिन्छ।
Transverse ह्यान्डल, यी उपकरणहरू थुप्रै सुसज्जित छ जो आन्दोलन को एक धेरै ठूलो सजिलो प्रदान गर्नुहोस्। उनको लागि धन्यवाद, तपाईं एक हाथ लागि गाडी तान्नु गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो यो सडक अनियमितताहरु ड्राइभिङ। स्टपहरू लोड स्थिरता वृद्धि र tilting हटाउनु। मार्गदर्शन दुई-पाङ्ग्रा ट्रक एक धेरै नै सरल संरचना, जोडेको जब यो लिन गर्दैन अप धेरै ठाउँ छ, र मूल्य कुनै पनि प्रयोगकर्ता एकदम सुलभ छ।
को गाडी परिवहन तंत्र भारी सामान गोदाम क्षेत्रको लागि सानो मा सामान्यतया सम्भव छैन, यस्तो कार, ट्रक र जस्तै रूपमा यहाँ डी एउटा अपरिहार्य उपकरण ट्रक छ।। यसलाई सफलतापूर्वक घरेलू उपकरण (रेफ्रिजरेटर, टीवी, वाशिंग मिसिन), सिलेंडर, ड्रम को यातायात लागि प्रयोग गरिएको छ। यो तपाईंलाई एकदम सजिलै अर्को स्थानमा वस्तुहरू सार्न वा लोड लागि यो तयार गर्न।
दुई-wheeled ट्रली गोदाम अक्सर थप अतिरिक्त hinged तखता, कारण जो प्लेटफर्म आवश्यक भएमा विस्तार गर्न सकिन्छ छ। डाली वा वायवीय - को पाङ्ग्रा कोठा मा तल्ला सतह आधारमा सेट गर्न सकिन्छ।
बगैंचामा वा देश मा सामान को यातायात को लागि एक माध्यम छनौट, सार्न हुनेछ जो मा कुनै न कुनै र नरम जमीन छलफल गर्नुपर्छ। विशेष गरी कठिन यदि ट्रली मा पाङ्ग्रा पनि सानो यो गर्नेछु। आदर्श विकल्प एक धातु रिम मा खडा, ठूलो inflatable पाङ्ग्रा छ। ठूलो महत्व लगातार र प्रतिरोधी डिजाइन छ। यो बगैचा गाडी, सुसज्जित निरन्तर छन् जो असमान भूमि अपनाउँछन् दुई तय रोक, संग मा सार्न धेरै असुविधाजनक छ। यसलाई त्यहाँ एक तह खाली छ जब यो गर्न धेरै सजिलो छ।
Desirably, को कार्गो कचौरा, दुई-पाङ्ग्रा बगैचा हात ट्रक संग सुसज्जित छ जो, एल्यूमीनियम बनेको छ। यो एकदम, वजन मा लाभ जंग गर्न प्रतिरोधी र नियमित टिन्टिङ आवश्यकता छैन।
व्यापक पाङ्ग्रेमा बैग दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्यो। तिनीहरूले किनमेल वा बगैचा गर्न क्रप छुटकारा गर्न, परिवारमा अति सहज छन्। यी बैग धेरै फराकिलो र तपाईं सजिलै हात र मेरुदण्ड मा तनाव सिर्जना बिना खाना र अन्य कुराहरू ओसारपसार गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरूले पनि कदम अप लोड को उठाने निकै सुविधा।
आज पसलहरुमा, त्यहाँ यस्तो बैग को एक एकदम ठूलो विविधता छ। तिनीहरूले डिजाइन, विशिष्टीकरण, डिजाइन र छन् जो को सामाग्री भिन्न। सामान्यतया, पानी-विकर्षक कपडा लागि प्रयोग गरिन्छ तिनीहरूलाई बनाउन धेरै हेरचाह गर्न सजिलो। जोडेको गर्दा, गाडी झोला धेरै सानो ठाउँ लिन्छ, त्यसैले यसलाई पूरा गर्न सुविधाजनक छ। केही उन्नत मोडेल साधारण देखि भेद गर्न गाह्रो हुन सक्छ हाते झोला। को unfolded फारममा, यो आइटम या उत्पादनहरु को एक पर्याप्त मात्रामा समायोजित गर्न सक्छन्।
मोडेल को छनोट फेला सबै मापदण्डहरु लागि सही झोला गाह्रो छैन त ठूलो छ। यो उपयुक्त झोला ट्रली किनमेल दुई-wheeled केही उद्देश्यका लागि त्याग दिन योग्य पाङ्ग्रा, एक तह बिस्तर, दूरबीन ह्यान्डल, आदि हुन सक्छ, तर अरूको लागि - .. चार-पाङ्ग्रा। कुनै पनि मामला मा, भारी अकाट्य को परिवहन को लागि एक उपकरण जस्तै को प्रयोग।
तपाईं स्वयं 150-300 किलो तौल बोक्न चाहनुहुन्छ भने, सहायता मार्गदर्शन दुई-wheeled कार्गो ट्रक गर्न आउँछ। एक सुविधा थप यसको reclining समतल, सर्किट र फाटक रूपमा विशेष Clamps उपस्थिति छ। केही मोडेल जो सिंढिमा माल ओसारपसार गर्न अनुमति दिन्छ विशेष पाङ्ग्रा एकाइ, सुसज्जित छन्। पानी संग बोतल सार्न, त्यहाँ जो फ्रेम एक विशेष आकार छ, निर्माण हो।
जहाँ तल्ला एकदम चिल्लो, डाली टायर मा पाङ्ग्रा संग फिट Carts छ भण्डारण ठाउँ, को लागि। ती दुबै घर भित्रका प्रयोग र बाहिर छन् - वायवीय पाङ्ग्रा संग सार्वभौमिक मोडेल छन्। मार्गदर्शन दुई-wheeled ट्रली एकदम longshoremen काम सुविधा। यसको लाभ - यसको आफ्नै हल्का, मजबूत डिजाइन र भारी र भारी कार्गो बोक्न सक्ने क्षमता।
कसरी चिया को एक स्थान ल्याउन? सबैभन्दा डिटर्जेंट
कसरी पुरुषहरु छाता चयन गर्न: सुझावहरू
जेल जुत्ता सम्मिलित: समीक्षा। GelActiv संग जेल insole प्रविधि
कसरी आफ्नो टाउको मा एक रूमाल बाँध गर्न?5तरिका
यशै। नाम र विशेषताहरु को मूल्य
पाम तेल बिना शिशु सूत्र। शिशु सूत्र बाख्रा दूध
के मानिस दिन?
त्यहाँ एक फ्युरेकुलोसिस थियो? उपचार व्यापक हुनुपर्छ।
Multivarka मा Goulash: छिटो र appetizing
Palmist बोरिस Akimov। "आफ्नो भाग्य कोर्नुहोस्"
तातियाना Terekhova: ब्यालेट विद्यालय